I uthole amaphuzu kuphela kusukela log e
Okubalulekile I uthole amaphuzu kuphela kusukela log e
2 iminyaka inyanga 1 edlule #516 by JanneAir15
Sawubona! Ngiye ngaphawula ukuthi uma ngivula i ngesihloko (kanje) Angikho kokuthola amaphuzu 10 okuyikhona kufanele uthole uma udala ngesihloko noma labo nezinye izinto ezifana ngokuthumela amazwana noma ukuphendula ezingaphezu kuka 150 lezinhlamvu okuthunyelwe. Ngathumela ithikithi abasebenzi kodwa ngingathanda ukukubuza futhi lapha. Ngakho ongazibekela ngicela ungisize?
2 iminyaka inyanga 1 edlule #540 by Colonelwing
Yebo ngiye uqaphela ukuthi kakhulu ,, French iforamu kusayithi awunikezi amaphuzu ...
Mhlawumbe into ayisebenzi kwesokudla mecanic isofthiwe.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #561 by Gh0stRider203
Mina ngizobe usho lokhu abaphathi
2 iminyaka inyanga 1 edlule #563 by Dariussssss
Uma ngikhuluma iqiniso ngokuphelele, Angazi ngisho nokuthi ... kumane kubonisa ukuthi kubalulekile kimi. Ngize lapha ukuze uthole ezinye izindiza kangcono FSX emhlabeni futhi lapha e-Forum, asize izinkinga futhi bajabulele kulo mphakathi amazing, ikhula, njengokuthi nsuku zonke .... cha ukuqoqa ezinye amaphuzu .. .
BTW, yini ukusetshenziswa lawo maphuzu?
2 iminyaka inyanga 1 edlule #564 by Gh0stRider203
UMA uya ngokuvumelana negama lakho, bese Goto Amaphuzu My uzobona lokhu esikrinini okhuphuka ..
Qoqa amaphuzu ukuze uthole khulula okubhaliselwe Jumbo.
Jumbo 1 okubhaliselwe kwenyanga = 1 000 amaphoyinti, 3 izinyanga = 2 000 amaphoyinti, 6 izinyanga = 3 500 amaphoyinti, 12 izinyanga = 5 500 amaphoyinti
iminyaka 2 2 izinsuku ezedlule #611 by Kyrelel
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi amaphuzu Logon ayisekho kwenzeke, futhi "Amaphuzu Yami" inketho isusiwe - manje, kufanele ukhokhele Jumbo? Kwadingeka (Ngicabanga) cishe 2500 amaphuzu.
unyaka 1 11 edlule #656 by Rolando
Kungaba kuhle ukuba uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nalesi!
unyaka 1 11 edlule #657 by Gh0stRider203
U-Rolando wabhala: Kungaba kuhle ukuthola ulwazi ngalokhu!
Angazi ukuthi yini ongayitshela, kodwa. Kubonakala sengathi asisatholi amaphuzu okwenza izinto lapha. Ngifana nanjengomnyama njengoba ukhona.
Ngiyabonga wathola: 22
unyaka 1 11 edlule #658 by rikoooo
Ngikhubaze uhlelo lwamaphoyinti ngoba sinezinkinga eziningi zezobuchwepheshe nalo, kodwa, esikhathini esizayo singasisebenzisa futhi uma sithola ukukhishwa kwezimbungulu.
Uma unamaphuzu angaphezulu kwe-1000 ungangicela ukungena kokubhalisa kwamahhala, ngakho amaphuzu akho awachitheka.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: PranavPoken, Gh0stRider203, JanneAir15
unyaka 1 11 edlule #659 by Gh0stRider203
ngabe ngiye ngaba cishe eduze ukuthi kwakungcono engakaze efanele lol
Isikhathi ukudala page: 0.233 imizuzwana